Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Ukuqokwa kwe-VIP eTurboNews » Raed Habiss, WTN, Jeddah, Saudi Arabia
Isipiliyoni seminyaka engama-30 esinezinkathi zezindiza, ezokuvakasha nezokuvakasha, ezobuchwepheshe, kanye nokutshalwa kwezimali.
Ubambe izindima eziningi zemboni yobungcweti; ukusatshalaliswa kohambo lwe-Saudi Airlines, uhlelo lwe-ejensi ye-IATA e-KSA, Umnikazi Wamasheya kanye ne-CEO ye-VIP Travel Club, kanye nenkampani yezokuvakasha edayisa yonke i-Destinations of The World - Saudi Arabia.
Umqondisi Wezokuthuthukiswa Kwezokuvakasha kanye nokutshalwa kwezimali emazweni e-OIC.
Njengamanje, iPhini likasihlalo enkampanini ye-Baseera Conferences and Exhibitions kanye ne-RHH Travel & Tourism Consultants e-Saudi Arabia.
Ukwethula inkundla yezobuchwepheshe yomhlaba wonke yokukhuthaza ukuqwashisa ngezokuvakasha, imfundo, ukuqeqeshwa, kanye nokushintshisana ngolwazi nolwazi.
Uhlelo lokukhokha kwezokuvakasha emhlabeni wonke, yingakho ngaqala i-IATA BSP e-Saudi Arabia eminyakeni engu-30 edlule.
Ukusiza ekudaleni nasekugcineni imisebenzi kuma-SMEs ezokuvakasha.
Okuningi ngokuqukethwe ku-Raed Habbiss
I-Saudi Arabia umninimasheya Ezokuvakasha Wtn
Isiguli Sokuqala Sithathiwe Ngokwelashwa Okusha Kwezinga Elithuthukile...
rafat al assaf uthi:
Februwari 14, 2022 ku-00: 55
is de opdrachtredacteur geweest voor eTurboNews izinsuku ezingu-20. I-Hij Wont e-Honolulu, e-Hawaii, kanye nezindawo zokudlela eziphuma e-Europa. Ngijabule kakhulu ngiphinde ngithumele abashana bakhe.